မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: သည်နှစ် မွေးသည့် ရင်သွေးငယ်တွေ (၁၃၇၇ ခုနှစ်)
ကျီးပေါင်းရောဂါ အပါအ၀င် နှလုံးရောင်ခြင်း၊ အာရုံကြော အားနည်းခြင်းများဖြင့် .. ဒီနှစ်နှစ်ကာလခန့်အတွင်းမှာ ဂဂျီဂဂျောင်နိုင်လှတဲ့ ကျွန်တော့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာ စာရိုက်ဖို့ စာရေးဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲစေခဲ့တာကြောင့် နှစ်စဉ်ရေးနေကြဖြစ်တဲ့ သည်ဆောင်းပါးစဉ်ဆက်တွေကို မနှစ်က လုံးဝ မရေးနိုင်ခဲ့တော့ပါ။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆောင်းပါးလေးတွေ ဖြစ်နိုင်သလောက် ဖြစ်ညှစ်ရိုက်မယ်…၊ အတတ်နိုင်ဆုံး ခေါင်းကြည်အောင် အာရုံကြောအားဆေးတွေလည်း ပုံမှန်သောက်ပြီး …ဒီဆောင်းပါးလေးတွေကို ချရေးပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာ ….စာဖတ်သူများ အသင်းသားများအတွက် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေနိုင်ပြီဆိုရင် ….ကျွန်တော် ကျေနပ်ရုံပါပဲ။
၁၃၇၇ခုနှစ် အတွင်း … ရင်သွေးမွေးရက် ရွေးခြယ်ကြရာဝယ်
တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဖွားမြင်သော ရင်သွေးငယ်များသည် မရဏဖွားဇာတာရှင်များ
တနင်္လာနေ့မှာ ဖွားမြင်သော ရင်သွေးငယ်များသည် အဓိပတိဖွားဇာတာရှင်များ
အင်္ဂါနေ့မှာ ဖွားမြင်သော ရင်သွေးငယ်များသည် ရာဇဖွားဇာတာရှင်များ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ဖွားမြင်သော ကလေးငယ်များသည် အထွန်းဖွား ဇာတာရှင်များ
ကြာသာပတေးနေ့မှာ ဖွားမြင်သော ကလေးငယ်များသည် ဘင်္ဂဖွား ဇာတာရှင်များ
သောကြာနေ့မှာ ဖွားမြင်သော ကလေးငယ်များသည် … ပုတိဖွား ဇာတာရှင်များ
စနေနေ့မှာ ဖွားမြင်သော ကလေးငယ်များသည် သိုက်ဖွားဇာတာရှင်များ
တနင်္ဂနွေနေ့ဖွား (မရဏဖွား) ဇာတာရှင် ရင်သွေးငယ်များ …
လူဝင်စားလို့ ခေါ်ဆိုထိုက်သော ကလေးငယ်များပါပဲ။ မိမိတို့ ဆွေမျိုးနီးစပ်၊ သွေးသားများထဲက တစ်ကျော့ပြန်လည်ကာ လူ့ဘ၀ကို ပြန်လည်တံခါးဖွင့်ဝင်ရောက်လာသော ကလေးငယ်မျိုးပါပဲ။ ဘ၀မှာ အလွန်ဝေးလံသော အရပ်ဒေသမျိုးမှာ …ဥစ္စာပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝစေတတ်သော အတိတ်ကံ အကျိုးပေးမျိုးလည်း ပါရှိလာပါတယ်။ နေရာကောင်းအလွယ်တစ်ကူရလွယ်သော ကံအကျိုးပေးမျိုးရှိပြီး …ညနေပိုင်းမှာ ဖွားမြင်ခဲ့ရင်တော့ ….ဒီကံအကျိုးပေးဟာ ပိုမိုသေချာတဲ့အပြင် ၊ သူဘာလုပ်လုပ် ဒိုင်းသဖွယ် ကာကွယ်ပေးနေမယ့် သူတွေကိုလည်း ….ဘ၀မှာ ရရှိလာမှာ သေချာပါတယ်။
တနင်္လာနေ့ဖွား အဓိပတိဖွား ဇာတာရှင် ကလေးငယ်များ ….
ထက်မြက်ခြင်း၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းခြင်း၊ စိတ်အလွန်ကောက်တတ်ခြင်း များ နဲ့ ကျော့ကျော့မော့မော နေတတ်ခြင်းများ ဒွန်တွဲနေမယ့် ကလေးမျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အလိုရှိရာကို ပြတ်သားစွာ ရည်ရွယ်ချက်ထားတတ်ပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တတ်သော သဘာဝစရိုက်ပါရှိလာတဲ့ကလေးငယ် မျိုးတွေဖြစ်တာကြောင့် အနာဂတ်အတွက် ထူးကဲစွာ ပူစရာမလိုတဲ့ ကလေးငယ်မျိုး လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ပေးသာ မတိမ်းစောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင် တစ်မိပေါက်တစ်ယောက်ထွန်း ဆိုသလို …မိသားစုရဲ့ လူနေမှုဘ၀ကို ပါ တိုးတက်မြင့်မားသွားအောင် …ရှေ့ဆောင် ဖောက်ထွက် လုပ်ကိုင်မယ့် ရင်သွေးငယ်မျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
မေတ္တာရေးအနေအထားဂြိုဟ်များပါ …အရပ်အတည်သင့်တာကြောင့် ကလေးငယ် (ကျား/မ) မရွေး …ဒီရက်ကို ရွေးခြယ်လို့ သင့်လျော်ပါတယ်။ သို့သော် သီရိဂြိုဟ် အင်အားနဲတာကြောင့် မိန်းကလေးရင်သွေးငယ်အတွက် ဒီတနင်္လာနေ့ကို ရွေးခြယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ….နာမည်ပေးရာမှာ တနင်္ဂနွေ နဲ့ စနေကို အင်အားမပျက်ယွင်းအောင် (၀ါ) မထိခိုက်အောင် ပေးနိုင်ဖို့ အဓိက လိုအပ်ပါမယ်။
အင်္ဂါနေ့ဖွား ရာဇဖွား ဇာတာရှင်ကလေးငယ်များ
အလွန်ထက်မြက်ပြီး …လူများစွာကို ရှေ့ဆောင်အုပ်ချုပ် …စီမံကွပ်ကဲနိုင်မယ့် ကလေးငယ်မျိုးပါပဲ။ တစ်ခု ..အထူးသတိပေးချင်တာကတော့ ...မိမိတို့ရင်သွေးငယ်ဟာ မိန်းကလေးလို့ ကြိုသိနေမယ်ဆိုရင်တော့ …ဒီနေ့ကို မရွေးချယ်ပါနဲ့။ အိမ်ထောင်ရေး ကောင်းနိုင်ဖို့ အလွန်အင်အားနည်းလို့ ပါပဲ။ ယောကျာ်းလေး ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရဲရဲသာရွေးချယ်လိုက်ပါ။ အနာဂတ်အရေးအတွက် ဘာမှ ပူပန်နေစရာမလိုတဲ့ ကလေးငယ်မျိုးတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ (နာမည်ပေးပုံပေါ်တော့ မူတည်ပြီး …ကောင်းကျိုးအတိုင်းအဆ ကွာခြားပါလိမ့်မယ်)။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွား အထွန်းဖွား ဇာတာရှင်ကလေးငယ်များ
ဘ၀မှာ နေရာကောင်း အလွန်ရလွယ်သော ကလေးများဖြစ်ပြီး…..ပညာရေးမှာလည်း …အထောက်အပံ့ကောင်းများ ရလွယ်သော ရင်သွေးငယ်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အောင်မြင်လွယ်သော ကံ ပါလာသူများဖြစ်ပြီး….နာမည်ပေးမှားယွင်းခဲ့ရင်တော့ …ကျားမမရွေး အိမ်ထောင်ရေး ကံ အားနဲရန်လွယ်ကူစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကလေးငယ်မျိုး ဖွားမြင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ အဖြစ်နိုင်ဆုံး နီးစပ်သင့်လျော်သော ပညာရှင်များနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး မေတ္တာရေး အိမ်ထောင်ရေး မထိခိုက်အောင် နာမည်ကို ဦးစားပေးမှည့်ခေါ်ပါလို့ တစ်လက်စတည်း အကြံထည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
ကြာသာပတေးနေ့ဖွား ..ဘင်္ဂဖွား ဇာတာရှင် ရင်သွေးငယ်များ
အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းစေလိုသော မိဘများအဖို့ တော့ …မိမိတို့ရင်သွေးငယ်သည် ကျား/ဖြစ်စေ … မ/ ဖြစ်စေ …စိတ်ပြတ်သားစွာ ရွေးခြယ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ဖွားကလေးငယ်တွေဟာ နာမည်ပေးသာ အလွန်အမင်းမတိမ်းစောင်းခဲ့ဘူး ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေး ရင်အေးရတဲ့ ကလေးငယ်မျိုးတွေပါပဲ။ နေရာထိုင်ခင်း ကောင်း နဲ့ နေထိုင်ရတတ်သော ကံပါလာကြသူများ ဖြစ်ကြသလို…. ပညာရေးကံမှာလည်း …အများစုတက်ရောက်သင်ကြားလိုသော စူပါ့စူပါ ကျောင်းမျိုးတွေ ၊ သင်တန်းမျိုးတွေကို တက်ရောက်သင်ယူခွင့် ရရှိတတ်ကြသော ကလေးငယ်မျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ်မှာတော့ ကြာသာပတေးနေ့ဖွားကလေးငယ်တွေဟာ ဘင်္ဂဖွား ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် … အနာဂတ် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေးရာများမှာ …. အားရလောက်စရာအချက်အလက်များစွာ ပါရှိလာကြသူများ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီရက်ကို ရွေးခြယ်မယ်ဆိုရင် ရင်သွေးကျားမမရွေး အတွက် ထောက်ခံအားပေးလိုက်ရပါတယ်။
သောကြာနေ့ဖွား ..ပုတိဖွား ရင်သွေးငယ်များ
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ရမယ့် ကလေးငယ်တွေပါ။ အရွယ်သုံးပါးစလုံးမှာ ..ကျန်းမာရေးအတွက် အနည်း နဲ့အများဆိုသလို သာမန်ထက်ပိုမိုဂရုပြုရမယ့် ရင်သွေးငယ်မျိုးတွေဖြစ်ပြီး၊ ကောင်းသော အချက်ကတော့ ဘ၀မှာ မမျှော်လင့်သော တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်မြင့်မားသွားနိုင်မှုကံ ပါလာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုးသွေးသားများနဲ့ ဘ၀မှာ ရန်သူသဖွယ် ရပ်တည်ရတတ်သော ကံလည်း ပါရှိတာမို့…ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဒီရက်ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေတော့ ကြိုတင်သတိပြုထားကြဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
စနေနေ့ဖွား …သိုက်ဖွား ရင်သွေးငယ်များ
အိမ်ထောင်ရေးကံ အားနည်းချက်ပါလာသော ကလေးများဖြစ်တာကြောင့် ( အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးဇာတာရှင်များအတွက်) …နာမည်ပေး မမှားယွင်းဖို့ အထူးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ဒီရက်ကိုမှ မဖြစ်မနေရွေးခြယ်ရတော့မယ် ဆိုရင်လည်း ….အရမ်းကြီးစိတ်ပူဖို့တော့မလိုပါ။ လောကုတ္တရာ အကျိုးစီးပွားကို အလွန် ရလွယ်သော ကံတစ်မျိုးပါလာသော ကလေးငယ်များမို့….သံသရာအရေးအတွက် စိတ်အေးရမယ့် ကလေးငယ်လေးတွေပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အကျိုးစီးပွား ရှာဖွေရရှိလွယ်သောကံလည်း ပါလာသူကလေးငယ်မျိုးတွေမို့…..အိမ်ထောင်ရေးတစ်ချက်သာ ထိမ်းချုပ်ထိမ်းကွပ်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် …Welcome လုပ်ဖို့ သင့်ပါပြီခင်ဗျား။
ခေတ်မီတိုးတက်လာတဲ့ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ဖေဖေ မေမေတို့ကလည်း သားသမီးငယ်လေးတွေကို ဘယ်ရက်ဘယ်အချိန်မှာ ၀င်လာခဲ့ပါဆိုပြီး …အချိန်ကိုက် တံခါးဖွင့်ပေးနိုင်လာပြီမို့….(သူ့အတိတ်ကံနဲ့လည်း ကိုက်ညီနေမယ်ဆိုရင် …) ရင်သွေးမွေးရက်ရွေးခြယ်ခြင်းဟာ …အလွန်အမင်း ငြင်းဆန်စရာမလိုတဲ့ …ကဏ္ဍတစ်ရပ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
ဒီအမြင်ကိုမြင်လာခဲ့ချိန်ကစလို့လည်း …ကျွန်တော်ဒီဆောင်းပါးမျိုးလေးတွေ စတင်ရေးပေးလာခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ့်ရင်သွေးမွေးရက်ကို ကိုယ်နှစ်သက်ရွေးခြယ်ထားသလိုမရခဲ့ရင်တောင်… နာမည်ပေးမှည့်ခေါ်ရာမှာ လမ်းကြောင်းရွေးခြယ်ပြီး ထိမ်းကွပ်ထားလို့ ရနိုင်တာမို့…ဘာနေ့မှာပဲဖွားမြင်လာသည်ဖြစ်စေ..စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းမရှိနိုင်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးသော မိဘများအဖို့ ..ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြီး ….အကျိုးအတန်အသင့် ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ..ကျွန်တော် ပင်ပန်းခံရကျိုးနပ်ပါပြီ။